News - Waa maxay farqiga u dhexeeya labada wax-qabeeye wax-qabad leh iyo makiinadaha wareega
Waa maxay farqiga u dhexeeya wax-qabad-sameeyaha laba-geesoodka ah iyo wax-beddelaha wareega ah?
Marka ay timaaddo xulashada mishiinka makiinadda, mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee ay macaamiisheennu na weydiiyaan ayaa ah: "Waa maxay farqiga u dhexeeya mideeyaha waxqabadka laba-geesoodka ah iyo makiinadda Rotary?" Waa su'aal aad ufiican kuwa hada bilaabaya makiinada wax lagu nadiifiyo, jawaabteedu aad ayey muhiim u tahay!
Rotary Polisher waa kan ugu da'da weyn fasalkiisa, ka hor inta uusan ka soo bixin ficilka cusub ee laba-geesoodka ah, kaliya waxaan haysanay nooca nuucaan oo kale. Polishers Rotary waa mid toos ah - madaxa ayaa ku wareegaya kaliya hal wado iyadoo aan loo eegin inta aad ku riixeyso rinjiga gaarigaaga, wuxuu sii wadi doonaa wareejinta xawaaraha la xushay. Waxay sidoo kale ku wareegeysaa wareegga joogtada ah, abuurista jaritaan xoog badan laakiin dhaliya kuleyl badan. Mashiinka wax lagu beddelo ayaa kuu baahan doona inaad khibrad dheeraad ah leedahay, waa inaad gacanta ugu wareejisaa makiinadda waxaadna u baahan tahay inaad ogaato sida ugu dhakhsaha badan ee mashiinka looga wareejiyo rinjiga. Polisher-ka wareega ayaa ka sii dagaal badan, sidaa darteed wuxuu sixi doonaa xagashada qotada dheer iyo cilladaha ranjiga, kaliya haddii si sax ah loo isticmaalo.
Dual Action Polisher (ama DA Polisher maadaama ay si guud ahaan loo soo gaabiyey) wuxuu ahaa abuur kacaan. Waxay ku wareegsan tahay 2 siyaabood oo kala duwan: madaxa ayaa ku wareegaya ficil wareegsan oo wareeg ah oo ku yaal dunmiiqa taas oo iyaduna ku wareegeysa dhaqdhaqaaq ballaaran oo wareegaya, sidaas darteed kuleylka u qaybinta aag ballaaran, waxay ka hortageysaa kuleylka xad dhaafka ah iyo isqabqabsiga, taasoo ka dhigeysa mid aad u nabdoon gaadhigaaga Natiijo ahaan, waxaad awood u leedahay inaad kaga tagto baalasheeyahan oo ku wareegaya hal meel isla markaana ka ilaalinaya inuu gubto rinjigaaga. Tani waxay ka dhigeysaa DA xulashada ugu fiican ee hiwaayadda hiwaayadda ee raadineysa inay gaariga ilaaliso 'cirifka sare' laakiin iyada oo aan laga walwalin dib-u-buufin!